Visits : 1125
PRO POS တွင် Expenses Report အသစ်တိုးထားပေးခြင်း
မိမိဆိုင်များ၏ အသုံးစရိတ်များကို ရက်စွဲအလိုက် ပြန်ထုတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ခြင်း၏ အသုံးစရိတ်များကို ထုတ်ကြည့်နိုင်သလို၊ ဆိုင်ခွဲများအားလုံးပေါင်းရဲ့ အသုံးစရိတ်များကိုလည်း အလွယ်အကူ ထုတ်ကြည့် နိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။PRO POS (Demo) အသုံးပြုကြည့်လိုသူများအတွက် &gt;&gt;&nbsp;https://shop.proxpos.comအသေးစိတ် သိရှိလိုပါက☎️&nbsp;09778915075 , 09954...
Visits : 1047
PRO POS တွင် Back Date ဖြင့် အရောင်းဘောင်ချာများ ပြန်ဖွင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
PRO POS တွင် Back Date ဖြင့် အရောင်းဘောင်ချာများ ပြန်ဖွင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။Back Date ဖြင့် အရောင်းဘောင်ချာများ ဖွင့်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ Setting တွင် Back Date Selling ကို Enable ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ထို့နောက် Manager or Admin Role ရှိသော Users များသည် POS Sale ပြုလုပ်ချိန်တွင် Date ကို မိမိပြင်ရောင်းလိုသော Date ဖြင့် အရောင်းဘောင်ချာများကို ဖွင့်ကာ...
၂၀၂၀ နှစ်သစ်ကူးလေးမှာ မိမိဆိုင်၏ Valued Customer များကို ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းပေးချင်သူများအတွက် PRO POS မှ Reward Point System ကို ထပ်တိုးပေးလိုက် ပြန်ပြီနော်☺️
PRO POS ရဲ့ Point System ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်1. Setting ထဲမှာ Reward Point System ကို Enable ပြုလုပ်ပေး ရပါမည်။2. Reward Amount Limit မှာ ဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်ယူရမယ်ဆိုတာကို ဖြည့်ပါ။3. Reward Points မှာကတော့ ဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်ယူရင် ပွိုင့်ဘယ်လောက် ပြန်ရမယ်ဆိုတာကို ဖြည့်ပေးရပါမည်။ဒီလိုဖြည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ Customer တွေ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ ဝယ်ယူတိုင်း ပွိုင့်တွေ Cus...
#EMS&nbsp;ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အသုံးပြုသော ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်ပါသည်။Employee Management System (Version 1.0) တွင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။🔹&nbsp;Company ProfileBusiness (or) Company ၏ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း၊ ပြင်ဆင် နိုင်ပါသည်။ Employee Card နှင့် Report များတွ...
7 - 12 of ( 43 ) records